Iyada oo kiisaska cusub ee COVID-19 ay hoos u dhacayaan, Bali waxaa laga yaabaa inay dib ugu furto dalxiisayaasha ajnabiga ah bisha Oktoobar
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Indho Indho Indoneesiya » Iyada oo kiisaska cusub ee COVID-19 ay hoos u dhacayaan, Bali waxaa laga yaabaa inay dib ugu furto dalxiisayaasha ajnabiga ah bisha Oktoobar
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Indho Indho Indoneesiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasiirka caafimaadka ee Indonesia Budi Gunadi Sadikin ayaa sheegay in dib u furista dadka ajaanibta ah ay sidoo kale ku xiran tahay 70% dadka bartilmaameedka ah oo helaya tallaalkoodii ugu horreeyay ee COVID-19.
Indonesia waxay si taxaddar leh ugu dhaqaaqaysaa inay xuduudeeda dib ugu furto booqdayaasha shisheeyaha ka dib mowjad labaad oo COVID ah oo masiibo ah.
Soo -booqdayaasha ajnabiga ah waxaa loo oggolaaday inay u safraan jasiiradda caanka ah ee Bali iyo meelaha kale ee loo dalxiis tago.
Ku-darka Indonesia ee kiisaska la xaqiijiyay ee COVID-19 ayaa hoos u dhacay 94.5% tan iyo heerkii ugu sarreeyay badhtamihii Luulyo
Wasiirka Isku -duwaha Arrimaha Badaha iyo Maalgashiga ee Indonesia, Luhut Pandjaitan, ayaa ku dhawaaqay in laga yaabo in dalka Koonfur -bari Aasiya u oggolaado booqdayaasha ajnabiga ah inay ku soo laabtaan dalka bisha Oktoobar.
Indonesia wuxuu si taxaddar leh ugu socdaa sidii dib loogu furi lahaa xuduudaheeda ka dib mowjad labaad oo masiibo ah oo COVID-19 ah, oo ay ka kacday kala duwanaanshaha Delta ee fayraska.
Laakiin ka dib markii si xoog leh loogu dhacay kiisaska COVID-19, dalxiisayaasha shisheeyaha ayaa laga yaabaa inay mar kale awoodaan inay u safraan jasiiradda loo dalxiis tago ee caanka ah ee adduunka Bali iyo qaybaha kale ee Indonesia oo caan ku ah booqdayaasha dibedda.
Sida laga soo xigtay wasiirka, ku darista kiisaska la xaqiijiyay ee COVID-19 ayaa hoos u dhacay 94.5% tan iyo heerkii ugu sarreeyay bartamihii bishii Luulyo.
"Waxaan ku faraxsanahay maanta in heerka taranku uu ka hooseeyo 1… Waa kan ugu hooseeya inta lagu jiro masiibada waxayna muujineysaa in masiibada la xakameeyay," ayuu yiri Luhut.
Astaamaha kale ee togan waxaa ka mid ah heerka deggenaanshaha isbitaalka qaranka oo hoos uga dhacay 15%, halka heerka wax -ku -oolnimada, ama saamiga dadka la tijaabiyey ee wanaagsan, uu ka yaraa 5%, ayuu yiri wasiirku.
Luhut wuxuu yiri haddii arrimuhu maanta sii socdaan “aad baan ugu kalsoonahay” in Bali dib loo furi karo Oktoobar.
Horraantii toddobaadkan, wasiirka caafimaadka Indonesia Budi Gunadi Sadikin ayaa sheegay in dib u furista ajaanibta ay sidoo kale ku xiran tahay 70% dadka bartilmaameedka ah ee hela tallaalkii ugu horreeyay ee COVID-19.